YouTube wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka daad gureyso kanaalka aadan dooneynin inaad ku aragto talooyinka - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »YouTube wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka guurto kanaal aadan dooneynin inaad hada ku aragto adigoo soo jeedinaya
Google ayaa soo bandhigaysa muuqaal cusub oo loogu talagalay YouTube. Isla mar ahaantaana, xulasho cusub ayaa la soo jeedinayaa: waxay u oggolaaneysaa in laga saaro bogga talooyinka bogga ee kanaalka aadan jeclayn, ama in ka badan.
Bogga hore ee YouTubexaqiiqdii waad dareentay inaysan ahayn kanaalada aad raacayso ee la soo bandhigo marka aad koontadaada ku jirto. Waxaa sidoo kale jira kanaalmo lagu talinayo, taas oo kuxiran waxqabadkaaga madal fiidiyowga. Dabcan tani waa fursad lagu helo waxyaabo cusub, laakiin laga yaabee inaad jeclaan lahayd inaad xalliso.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in Google ay siin doonto isticmaaleyaasha aalad wax ku ool ah oo ay ku xalliso waxaad rabto inaad aragto iyo gaar ahaan ma ku aragtid bogga bogga. Xulashada kanaal kasta oo la soo jeediyo oo ku yaal bogga hore (xulashooyinka la heli karo adoo gujinaya xargaha tooska ah markay ku dul wareegayaan fiidiyow jiirka ah), hadda waxaa jiri doona badhan heersare ah.
Ikhtiyaarka u sheegaya YouTube inuu joojiyo la talinta kanaal gaar ah.
Kala sooc bogga hore
« Intaa ka dib, waa inaadan mar dambe ku arkin fiidyowyada kanaalkan ku yaal bogga hore ee YouTube-ka. , Wuxuu qoraa shirkadda Mareykanka, bishii Nofeembar ee 7 blog dhejin. Kani waa kaliya bogga guriga: fiidiyowyada marwalba waa la heli karaa iyadoo qayb ka ah raadinta, adoo booqanaya bogga loogu talagay kanaalka ama tabeedka isbeddelada haddii ay aad u caan tahay.
Haddii aad isticmaasho barnaamijka mobilada ee YouTube-ka, waxaad u badan tahay inaad horay uga gudubtay ikhtiyaarkan, maadaama ay diyaar ahayd ilaa xagaagan oo ku saabsan Android iyo macruufka. Waxa isbeddelada halkan ku jiraa ayaa ah in hadda lagu sii kordhiyo nooca shabakadda ee masraxa. Waxay la socotaa muuqaal cusub oo loogu talagalay YouTube, oo la duubay, kaas oo asal ahaan ka kooban in la weyneeyo thumbnails-yada fiidiyowga.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/568119-youtube-va-vous-permettre-devacuer-les-chaines-que-vous-ne-voulez-plus-voir-en-suggestion.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=568119
Qoyska sunta ah: Calaamadaha 11 ee nabaad-dhaafka qoyska - SANTE PLUS MAG